Belize - Fitantanana ny jono | Reef Resilience
Belize - Fitantanana ny jono
Enga anie 9, 2014
Miaro ny Reef Grazers amin'ny famindrana ny Coral Reef Recovery: Fitantanana ny harena voajanahary manerantany any Belize
Toeram-ponenan'ny Lapan'ny Belarosin'ny Belize Barrier.
Belize dia fantatry ny zavamananaina mahavariana mahavariana, na an-tanety na an-dranomasina. Ny haraton'izy ireo dia efa ela no noheverin'ny sasany amin'ireo karazam-borona madinidinika indrindra any Karaiba, na dia nanomboka nampiseho famantarana mampidi-doza aza izy ireo tamin'ny faran'ity taona ity. Ny fanadihadiana 2006 momba ny vatohara 140 manerana an'i Belize dia nahatsikaritra fa nihena hatramin'ny 30% amin'ny 1995 ka hatramin'ny 11%. Ny Society for Wildlife Conservation (WCS), izay niasa tany Belize nanomboka tamin'ny 1980s mba hanampy amin'ny fitazonana ny tontolo iainana an-dranomasina ao amin'ny firenena, dia manao fikarohana momba ny fahasalaman'ny haran-dranon'i Belize amin'ny alàlan'ny toeram-ponenany an-dranomasina ao Glover.
Ny haran-dranomasin'i Glover dia ao anatin'ny rafitra fisorohana finday ao Belize Barrier, izay ahazoan'ny mpanjono, ary koa ny fisamborana. Ny WCS dia nahita fa ny mpiangona sy ny mpikamabana dia efa simba tanteraka ary ny ampahany amin'ny parrotfish amin'ny tratra dia avo roa heny eo anelanelan'ny 2004 sy 2008 satria ny karazana papango dia heverin'ny mpanarato ho "ny trondro tsara indrindra" amin'ny fijinjana.
Ny fiantraikan'ny mpanjono mitaingina karazam-bary dia olana lehibe amin'ny fiantraikany goavana ho an'ny fahasalaman'ny haran-dranon'i Belize. Ny grenady toy ny parrotfish dia mitana anjara toerana manan-danja eo amin'ny tontolo iainana ao anaty haran-dranomasina; Raha mihinana ala maro be izy ireo, dia mihazona ny fitombony amin'ny fikarohana izy ireo, ary manome antoka fa tsy mitombo ny vatohara. Ny algée dia afaka misambotra ny haran-dranomasina, manilika ny fitomboany, ary mampihena ny fahombiazany amin'ny fandraisana mpiasa.
Parrotfish Rainbow (Scarus guacamaia), izay trondro matavy indrindra any Karaiba. Sary © Julio Maaz / WCS
Ny fahasalaman'ny vatohara dia mifamatotra akaiky amin'ny fisian'ny trondro voajanahary toy ny parrotfish. Raha mbola nanohy nijinja vatomamy ny mpanarato tany Belize dia nanomboka nidina haingana ny isa azony. Fikarohana momba ny fiovan'ny fiarahamonina trondro taorian'ny vanim-potoana fito taona (2002-2009) ny fanjonoana tany Belize dia nampiseho ny fihenan'ny% 41 amin'ny parrotfish tamin'izany fotoana izany. Manana fiantraikany hita eo amin'ny vatoharan-dranon'i Belize ny ala mihoatra ny hazandrano. Ny fandinihana iray dia nahatsikaritra fa ny làlan-kira atolla ao amin'ny haran-dranomasin'i Glover izay efa salama tsara indrindra amin'ny rakotra 75% ankehitriny dia kely noho ny 20% ny haran-dranomasina noho ny tohodrano.
Ny safidy nentim-paharazana nentim-paharazana mba hanampiana ireo karazan-tsakafo tafahoatra dia matetika no fanidiana fisaka. Na izany aza, WCS dia nanao fikarohana nandritra ny taona 14 tao amin'ny Reef Glover, ary nahita fa raha nisy ny fandraràna ny fanjonoan'ny Zone Conservation ao amin'ny tahirin-dranomasina dia nanampy ireo karazam-borona toy ny barracudas sy snappers recover, dia tsy dia nisy fiantraikany tamin'ny fanarenana ny karazam-borona . Midika izany fa tsy ho ampy ny fandraràn'ny fanjonoana mba hampihenana ny fitomboan'ny ala ary hanampiana ny hodi-biby. Ity fampahalalam-baovao ity, miaraka amin'ny vaovao vao haingana momba ny fahasalaman'ny haran-dranon'i Belize, dia nanampy ireo mpandray anjara hahatakatra ny filàna fomba hafa sy mahaliana kokoa amin'ny fiarovana ny haran-dranon'i Belize: hiaro ireo haran-dranomandry lehibe. Ireo mpanarato teo an-toerana dia nanolo-tena an-tsitrapo ny fandraràna ny lapo-jono rehefa avy nazava tamin'izy ireo fa tena ilaina ireo trondro ireo ho an'ny fahasalaman'ny vatohara ary noho izany ny fivelomany. Tamin'ny April 2009, nanjary lalàna nasionaly ny fandrarotana an-tsokosoko ny fanjonoana ny parrotfish raha nandamina fitsipika vaovao (Governemanta 2009) ny governemantan'i Belize mba hiarovana ireo karazan-javamaniry voajanahary.
Sambo mpanjono mahazatra iray tao Belize. Sary © Julio Maaz / WCS
Ny voalohany amin'ireo fitsipika vaovao dia mandràra ny fakana rano sy ny fialokalofana amin'ny rano any Belize. Ireo karazana ireo dia karazana gripa lehibe, noho izany, ity lalàna ity dia mivantana mivantana ny fitomboan'ny trondro voa sy ny fiantraikan'izany ratsy amin'ny fahasalamana haran-dranomasina izany. Amin'ny fampiroboroboana proteinina sy proteinina feno proteinina, ny fanantenana dia ny hanampiana ny isa azony ary hampihena ny fitomboan'ny ala izay manimba ny haran-dranon'i Belize. Belize no firenena voalohany mametraka lalàna nasionaly hiarovana ireo mpitrandraka haran-dranomasina, izay manakiana ny fahasalaman'ny haran-dranomasina. Raha ny marina dia maro no mihevitra ity lalàna vaovao ity ho fenitra vaovao momba ny fiarovana ny haran-dranomasina, satria ny tetik'asa fitantanana dia hatramin'izao dia mifantoka amin'ny sehatry ny fiarovana ny tontolo iainana (MPA). Mazava ho azy fa ny fampiharana sy ny fanarahan-dàlana no tena ilaina mba ahazoana antoka ny fahombiazan'ny fandraràna nasionaly. WCS dia manome fanampiana ara-teknika ho an'ny Departemanta momba ny varotra Belize mba ahazoana antoka fa hampihatra io lalàna vaovao io ny manampahefana sy ny patrô fiasa.
Ny Dr. Peter Mumby dia manazava ny maha-zava-dehibe ny vatan-trondro dia ny fihinanam-boalavo ny fitazonana ny fahasalaman'ny haran-dranomasina ho an'ny vondron'ireo mpanarato iray ao Belize City. Sary © WCS
Ny andiany faharoa amin'ny fitsipika vaovao dia manampy amin'ny fiarovana ny Nassau Grouper tandrefana (Epinephelus striatus), izay voatanisa amin'izao fotoana izao ho tandindonin-doza avy amin'ny lisitry ny mena amin'ny karazam-biby tandindomin-doza IUCN. Ny fanaratoana ny mpihaza ny Nassau Grouper dia mbola azo zahana saingy efa voafetra ankehitriny - ankehitriny dia farafahakeliny sy farafaharatsiny ankehitriny, ary ny mpikaroka rehetra dia tsy maintsy entina manontolo mba hahafahana manara-penitra. Ankoatr'izay dia voaro amin'ny fametrahana ny fitrandrahana ny Nasionalin'ny Nassau, ary voarara amin'ny alàlan'ny valan-javaboary an-dranomasina ankehitriny. Ny andiany fitsipika fahatelo dia mamorona faritra maromaro "tsy misy" ao amin'ny faritra voaaro, izay mihidy ny manjono. Ireo faritra voafantina dia faritra misy toeram-pambolena miavaka miaraka amin'ny tontolo iainana tsy manam-paharoa sy / na marefo.
Sarotra amin'izao fotoana izao ny manombatombana ny fiantraikan'ny fandraràn'ny firenena ambony ny fiompiana haran-dranomasina amin'ny fahasalaman'ny haran-dranomasina Belize noho ny fisian'ny lalàna vao taona vitsy lasa izay tamin'ny 2009. Ny WCS dia mitohy ny fanaraha-maso. ao amin'ny Glover's Reef mba hanombanana ny fanarenana ireo boloky parrotfish amin'ity tranokala ity, saingy mbola tsy misy mazava ny fitomboan'ny hakitroky. Misy ihany anefa ny porofo matanjaka fa ny fandraràn'ny jono dia manampy ny mpihaza ny haran-dranomasina. Tamin'ny 2011, ny biomassie herbivore ao Belize dia nihoatra ny ambaratonga voarakitra tamin'ny 2006 ary nitombo 33% ambonin'ireo haavo ambany norefesina tamin'ny taona 2009. Ity fiakarana biomassie herbivore ity dia tokony hanondro ny fihenan'ny fanjakan'ny ahidrano ao amin'ny vatoharan'i Belize.
Ny fahombiazan'ny fandraràn'ny fanjonoana amin'ny famerenana indray ny fambolena sy ny fiangonan'ny vatohara any Belize dia novaina tamin'ny fianarana teo amin'i 2009 sy 2011. Ny fitomboan'ny fitrandrahana trondro fitrandrahana dia hita tany amin'ny antsasaky ny toerana nianaran-dàlana, saingy ny toy izany ihany no nitovy ny fonon-kala sy ny macroalgal. Na dia izany aza, ireo mpanoratra ny fianarana dia manondro ny tsy fahampian'ny fiovana amin'ny alàlan'ny vatohara sy alg amin'ny fitrandrahana ny fandraràna ny haran-dranomasin'ny mpanjono.
Stop parrotfish (Sparisoma viride) miaraka amin'ny tangs manga, izay koa fiarovana grazera. Sary © Virginia Burns / WCS
Toa nahomby ny ezaka fampiharana satria vitsy dia vitsy ny tranga fisamborana parrotfish tsy ara-dalàna hatramin'ny nampidirana ny fandrarana. Ny valin'ny fandalinana génétika tamin'ny 2012 tamin'ny santionany fanenitra manerana an'i Belize dia mampiseho koa ny fanarahan-dalàna tsara amin'ny fandraràna - mihoatra ny 90% ny fonosana voamarina dia tsy parrotfish.
Ny fikarohana lalina momba ny foto-kevitra atrehana (amin'ity tranga ity, ny fifandraisana misy eo amin'ny fahasamihafan'ny parrotfish sy ny fahasalaman'ny vatohara) dia tena ilaina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara.
Ny fikarohana lalina dia manan-danja koa amin'ny fanazavana sy ny fahazoana ny fitokisan'ny mpiray monina an-toerana. Raha mahita izy ireo fa ny fikarohana dia manohana mazava amin'ny teboka iray, dia mety hanaraka azy ireo kokoa.
Ny mpanarato dia mpiara-miombon'antoka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria ny ankamaroan'ny zavatra ataon'izy ireo amin'ny fiainany andavanandro dia miteraka ny ranomasina. Tena ilaina ny mahazo ny fanohanany ary manazava mazava tsara azy ireo fa ny vatoharan-dranon'ny mahantra dia ny fivelomany.
Ny fampidirana ireo mpanarato avy any amin'ny faritra dia afaka manome fahalalana maro eo an-toerana, ary koa ny fividianana sy ny fanarahan-dia ao aoriana.
Ny ezaka ataon'ny MPA sy ny ezaka eo amin'ny fiarahamonina dia ampahany manan-danja amin'ny fiarovana ny haran-dranomasina saingy ny olana sasany dia mitaky vahaolana amin'ny fomba fohy kokoa.
Ny programa fanaraha-maso sy ny jono dia mahazo ny programa fanangonana angon-drakitra WCS efa an-taonany maro niaraha-niasa tamin'ny Departemantan'ny Jono, ary hitohy ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny firaketana ny fanarenana ireo parrotfish ao amin'ny Glover's Reef sy hanarahana ny fahasalaman'ny haran-dranomasina. Io asa io dia novatsian'ny Oak Foundation, USAID, ary ny Summit Foundation voalohany indrindra.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikambanana fiarovana ny biby fiompy
Departemantan'ny faritany Belize
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBelize dia nandray andraikitra mba hamonjy ireo haran-dranomasina sy jono, Fikambanana mpiaro ny bibidiamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBelize Limo fisaka fisakafoanana, Fikambanana fiarovana ny biby fiompy
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFaritra voaaro any Belize izay mampitombo ny isan'ny trondro trondro, Wildlife Conservation Society
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy fialan-tsasatra amin'ny alàlan'ny sakafo Karibeana dia miala amin'ny cascades trophicmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsapana ho fanaraha-maso ambany: afaka manakana ny fanakatonana ny tsy fahampian'ny fanaratoana manohitra ny fanapahana algeramanokatra fisie PDF
Nosoratan'i Florence Depondt